ဘုန်းကျော်: လူ့ဘောင်သစ်က စောက်တလွဲ လူအချို့ သို့-
လူ့ ဘောင်သစ် တစ်ခုလုံးဟာ နယ်စပ်မှာ လုပ်စားကိုင်စားနေတဲ့ကောင်တွေ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
အောင်မိုးဇော် မင်းမင်းဦး ၊ကုလား (ဖာသည်မလင် စိုးညွန့် လား)၊ ထွဋ်ဦးလှိုင် ၊ ခင်မောင်တင့် ၊ နောက်ဆုံးပါလာတဲ့ ငတိုး (တိုးတိုးထွန်း) သူတို့က လူ့ ဘောင်သစ် ရယ်ဆိုပြီး လူ့ ဘောင်သစ်ကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး ။ ရေးစရာရှိရင် နာမည်နဲ့အပြတ်ရေးပါ ။ တော်လှန်ရေးမှာ ဘယ် NGO နောက်လိုက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကို ၊ ဘယ်လို အဖွဲ့ဝင် ရဲဘော်ကမှ ကျေးဇူး တင်ဖို့ မလိုပါဘူး ။ ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးကန်းတယ်လို့ ပြောတာတော့ သူတို့ စောက်ရှက်မရှိတာပဲ ။ လူ့ ဘောင်သစ်နဲ့ပါတ်သက်လို့ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကျန်ပါသေးတယ် ။ အခု နယ်စပ်နေပြီး ဘုန်းကျော်ပြောသလို ငြိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေသိပါတယ် ဘာတွေရှင်းရအောင်ကျန်တယ်ဆိုတာ။
လူ့ ဘောင်သစ် ကို ကရင့်နယ်မြေ ထိ သယ်လာပြီး အလံထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဟာ တကယ်တော့ သူတို့ ဘာဆိုတာသူတို့ သိပါတယ်။ လူ့ ဘောင်သစ် အလံကို သူတို့ မပိုင်ပါဘူး ။ ပါတီပေါ်လစီနဲ့ပါတီ ပေါ်သစ္စာရှိဖို့ ဆိုတာ သူတို့ ပြောတိုင်းခေါင်းငြိမ့်ခိုင်းတိုင်းလုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်မဟုတ်ပါဘူး ။ ပြောလိုက်ပါ မင်းတို့ စောက်ရူးလားလို့ ။ ကိုမိုးသီးဇွန်လို လူကြီးတယောက်ကိုပဲ ဒီကောင်တွေ နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးလို့ ရမယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန်လို မဟုတ်တဲ့ ကောင်တွေ တပုံကြီးက မသေသေးသလို ဒီနယ်စပ်မှာ ကပ်မြှောင်တော်လှန်ရေး တီးလုံးနဲ့ နီပြနေတဲ့ကောင်တွေ နဲ့စာရင်းရှင်းချိန်နီးလာပါပြီ အဲဒီအချိန်က ဘုန်းကျော် ပါ လူ့ ဘောင်သစ်ရဲဘော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါသင့်ပါတယ်။
အင်း .. ဒီလိုနဲ့ပဲရန်သူကိုမတော်လှန်နိုင်သေးပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်တော်လှန် တပည့်မွေးဆရာမွေးမွေးကြ လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်ကြနဲ့ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး အားလုံးဟာ ဇီးသီးသည်မောင်ဗျိုင်း မဗျိုင်းတွေပဲ ဒါကြောင့်လဲ တော်လှန်ရေးအနှစ် ၆၀ ကျော်နေတာ
တကယ်တော့ လူ့ဘောင်သစ် ပါတီက သနားပါတယ်. ဖြူစင်သန့်ရှင်းပါတယ် .. တကယ်ညစ်ပေအောင်လုပ်နေတာ လူတချို့ပါ.. ဘာနိုင်ငံရေးလူ့ပ်ရှားမှုမှမလုပ် .. တခါလာလည်း ကြော်ငြာချက်ထုတ် . ဆွေးနွေးပွဲတစ်ချို့လောက်လုပ်ရုံနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေပြီထင်နေတာ. လူ့ဘောင်သစ်မှာ တကယ်တော့ အတွေးအခေါ်ရှိ ပညာတက်တဲ့လူ မရှိသလောက်ပဲ.. ခပ်ညံ့ညံ့လူတွေက ခပ်ညံ့ညံ့လုပ်တာ မဆန်းပါဘူး .